this, too, shall pass away | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » this, too, shall pass away
Posted by မောင်ဆန်း on Oct 31, 2011 in My Dear Diary | 38 comments
တစ်ရက် နေပြည်တော်ကို သွားဘို့ ကိစ္စ တစ်ခု ပေါ်လာတယ် ၊ ပုံမှန် ဆို လိုင်းကား နဲ့ ပဲ သွားလေ့ရှိပေမဲ့ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ အခြေအနေအရ လေယာဉ်နဲ့ပဲ သွားဖြစ်လိုက်တယ် ၊ လေယာဉ် ခရီးစဉ်က နေပြည်တော် ၊ ပြီးတာနဲ့ ရန်ကုန်ကို ပြန်မလာပဲ တခြား ခရီးစဉ်တွေ ဆက်သွားမှာ ၊ ဆိုတော့ လေယာဉ်ပေါ်ကို ရောက်တဲ့အချိန် တခြားခရီးစဉ်တွေကို ဆက်သွားမဲ့ ခရီးသည်တွေက လေယာဉ် တ၀က်လောက်ကနေ နောက်ပိုင်း အပြည့် နေရာယူထားပြီးသား ဖြစ်နေပြီ ၊ ကျွန်တော့ ခုံနံပတ်က အလယ်လောက်မှာမို့ ခုံနံပတ် အတိုင်း ၀င်ထိုင်တော့ ကျွန်တော့ရှေ့က ခုံတွေက လွတ်နေသေးတယ် ၊ ချန်ထားရင်း မရောင်းဖြစ်လို့များ ပိုနေသလားလို့ တွေးမိသေးတယ် ၊ ခဏနေတော့မှ နိုင်ငံခြားသား တချို့တက်လာတယ် ပုံစံတွေ အရတော့ သံရုံးက ဒါမှမဟုတ် အစိုးရ ကိစ္စနဲ့ လာတဲ့သူတွေ ဖြစ်နိုင်တယ် ၊ သူတို့ အုပ်စုက ရှေ့ဘက်က ခုံတွေမှာ ၀င်ထိုင်တယ် ၊ သူတို့နောက်ကမှ မြန်မာအုပ်စု တစ်ခု တက်လာတယ် ၊ နောက်မှ တက်လာတာဆိုတော့ မြန်မာပြည်ထုံးစံအရ တော်တော်အရေးပါ ၊ အရာရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာပဲ.. ဟ လို့ လဲ တွေးမိလိုက်ပါသေးတယ် ၊ တွေးမယ်ဆို တွေးချင်စရာကောင်းတာက အသက် (၅၀ )ကျော်ကျော်လောက် ရှိမဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အသားဖြူဖြူ ဥပဓိရုပ်ကောင်းကောင်း ၀တ်စားထားတာလဲ လက်ဝတ်လက်စားက ဘေးလူတွေ သတိထားမိလောက်တဲ့အနေအထား သူ့နောက်မှာ စစ်ဝတ်စုံ ၀တ်ထားတဲ့ ဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်ပါတယ် အမျိုးသမီးအတွက် နေရာချတာ လိုတာတွေ လုပ်ပေးနဲ့ ၊ နောက် အိမ်အကူလို့ ယူဆရတဲ့ ကလေးမလေး နှစ်ယောက်ပါတယ် ၊ ဒါဆို ရင်တော့ သေချာပြီ ဒီအမျိုးသမီးက နေပြည်တော်မှာ နေတဲ့ ကတော်ကြီး တစ်ယောက်ပဲ ၊ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့နေတော့ ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ မျက်နှာခန့်ခန့်ကြီးကို အခုထိ မြင်နေမိသေးတယ် လေယာဉ်က ထွက်ခွာနီး ဆိုတော့ လိုအပ်တာ ပြင်ဆင် နဲ့မို့ နောက်ထပ် ခရီးသည်တွေ ထပ်တက်လား မတက်လား ဆိုတာတောင် သတိမထားမိလိုက်ပါဘူး…၊ ကြုံတုံး ယောင်္ကျား နဲ့ မိန်းမ ကြားက သတိထားမိတဲ့ ကွာဟချက်လေး တစ်ခု ပြောရရင် ယောင်္ကျားအများစုက စောစောက အမျိုးသမီးလို သိသာထင်ရှားလွန်းနေလို့ သတိထားမိတာ နဲနဲကလွဲလို့ ကိုယ်နဲ့ ခဏ စကားပြောတဲ့သူ ကိုယ့်ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ သူတွေရဲ့ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှု တွေကို မှတ်မှတ် ရရ မရှိကြပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေကျ အရွယ်ကြီးကြီး ခဏထား ၊ အသက် ၈၊၉ နှစ်အရွယ်တောင် မှ ခဏကြုံလိုက်တဲ့သူ (တကယ့် ခဏလေး) ဘယ်လိုအ၀တ်အစား အရောင် ၊ ဒီဇိုင်း ၊ဘယ်လို ဖိနပ်၊ ဘယ်လို လက်ဝတ်ရတနာ တွေကို ၀တ်ဆင်ထားပါတယ် ဆိုတာ မှတ်မိကြတယ် ၊ ဒါ ..မိန်းကလေးတွေရဲ့ မွေးရာပါ အရည်အချင်းလို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်…
လေယာဉ်တက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ပါလာတဲ့ စာအုပ်လေး ဖတ် ၊ ဘေးခုံက ခရီးသွားဖော်နဲ့ စကားစမြည်ပြော ၊ ဟို ငေး ဒီငေး ဟို တွေး ဒီ တွေး ပေါ့ ၊ ရန်ကုန် – နေပြည်တော် ဆိုတာလဲ သိပ်မဝေးတော့ တစ်နာရီသာသာ လောက်နဲ့ နေပြည်တော် ရောက်သွားတယ် ၊ ရှေ့ ခရီးဆက်ကျမဲ့ ခရီးသည်တွေက လေယာဉ်ပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့တယ် ၊ လေယာဉ်ပေါ်က နိုင်ငံခြားသား အုပ်စု အရင်ဆင်းသွားတယ် ၊ နောက် ဟို အမျိုးသမီးနဲ့ အဖွဲ့ ၊ ပြီးတော့ ကျန်တဲ့သူတွေ ဆင်းကြတယ် ၊ လေယာဉ်အောက်မှာ ကားလတ်တစ်စီး နဲ့ ကားကြီး တစ်စီး ရပ်ထားတာတွေ့လို့ ၊ ဘယ်ကားနဲ့လိုက်ရမှာလဲ ဆိုတာ တွေ့တဲ့ ၀န်ထမ်း တစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တော့ ၊ သူက VIP လားလို့ ပြန်မေး တယ် ၊ နိုင်ငံခြားမှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်လောက်ပဲ VIP လို့ သတ်မှတ်တယ် ကြားဖူးတယ် ၊ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လို အချက်တွေနဲ့ သတ်မှတ် ထားမှန်း မသိပေမဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ လူကြီးလဲ VIP ၊ ဇနီး ၊သား ၊ သမီး ၊ တူ ၊ တူမ ၊ ယောက်ဖ ၊ နောက်ဆုံး သူတို့အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ ခွေးတောင် VIP လို့ သတ်မှတ် ကျလွန်း လို့ VIP ဒီလောက် ပေါတာတောင် မှ ကိုယ်က ဘာအရေးမှ မပါတဲ့သူ တစ်ယောက် ၊ မ VIP တဲ့ သူ တစ်ယောက်မို့ အမြန်ဆုံး ခေါင်းယမ်းပြ လိုက်တော့ ကားကြီးကြီး ပေါ်ကို လက်ညှိးထိုးပြတယ် ၊အဲဒါနဲ့ ကားကြီးပေါ်တက် ကားကြီးပေါ် ရောက်မှ ကားလတ်နဲ့ လာကြိုတဲ့ VIP ဆိုတာကို စပ်စုကြည့်လိုက်တော့ အရင်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၊ အခု ပြည်နယ် လား တိုင်းလား တစ်ခုခု မှာ ၀န်ကြီးချုပ်လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက သူ့သမီးလေးကို လာကြိုနေတာ တွေ့ရတယ် ၊ သမီးက အသက် ၂၅၊ ၃၀ လောက်တော့ ရှိမယ် ၊လေယာဉ်ပေါ်တုန်းက အဲဒီ မိန်းကလေး ပါလာမှန်းတောင် သတိမထားမိပါဘူး ၊ အခု သူကလေး က လေယာဉ်ပေါ်က သူ့အဖေဆီသွားတဲ့အချိန် တကယ့်ဟန်အပြည့်နဲ့ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့လို့ ၊ သူတို့ သားအဖနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေက VIP ပဲ တင်မယ် ဆိုတဲ့ ကားလတ်လေး နဲ့ ထွက်သွားကျတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့လို ဘာအရေးမှ မပါတဲ့ အုပ်စု ကလဲ ကားကြီးနဲ့ ခရီးသည် အဆောင်ဆီကို ထွက်တယ် ၊ ဘယ်ကားနဲ့မှ လိုက် မသွားတဲ့ သူတွေ ရှိတယ် ၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာ တုန်းက ကျေနပ်ပီတိ အပြုံးတွေနဲ့ ဝေဖြာနေတဲ့ အမျိုးသမီးရယ် သူ့အဖွဲ့တော်သားတွေရယ် ၊ အဲ.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတာ စောစော က အမျိုးသမီး ပေမဲ့ စောစောက အပြုံးမျိုးနဲ့တော့ မဟုတ်တော့ဘူး မကျေနပ်ပြုံးလား၊ ဒေါသပြုံးလား၊ မချိ ပြုံးလား ခွဲခြားလို့ မရနိုင်တဲ့ အပြုံး တစ်ခုခုနဲ့ပဲ…………….
ပုံပြင်လေး တစ်ခု ကြားဖူးတယ် ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီးတစ်ပါး က ညီလာခံ မှာ သူ့ရဲ့ ပညာရှိမှူးကြီး မတ်ရာတွေကို တာဝန် တစ်ခုပေးတယ်၊ တာဝန်က ဘုရင်ကြီး အမြဲ မြင်နိုင်တဲ့ နေရာမှာ စာကြောင်းတစ်ကြောင်း ကပ်ထားရမယ် ၊ အဲဒီစာကြောင်းက ဘယ်လိုအချိန် ၊ဘယ်လိုကိစ္စ နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လိုက်လျောညီထွေ မှုလဲ ရှိ ၊ မှန်ကန်မှုလဲ ရှိရမယ် လို့ အမိန့်တော် ချမှတ်လိုက်တော့ ပညာရှိမှူးမတ်အပေါင်း အမျိုးမျိုး တွေးတောကြည့် ကြ ၊ခေါင်းချင်းရိုက်ပြီး တိုင်ပင်လိုက်ကြတော့မှ စာကြောင်း တစ်ခု စဉ်းစားမိပြီး ဘုရင်ကြီးကို သံတော်ဦးတင်နိုင်ကြတယ် “ this, too, shall pass away ” တဲ့ ကောင်းတာပဲ ဖြစ်စေ၊ ဆိုတာပဲ ဖြစ်စေ ဘယ်ဟာ မှ မတည်မြဲဘူး ခေတ္တ ခဏသာပဲ လို့ ယူရမယ် ထင်တယ် ။ ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးက သူ့လက်စွတ်မှာ ရေးထိုးရအောင် ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေကို အကောင်းဆုံး စကားလုံး ရှာဖွေတင်ပြဘို့ တောင်းဆိုခဲ့ရာက ပေါ်ပေါက်လာတယ် ဆိုတာမျိုး အမျိုးမျိုးသော ပုံပြင်တွေ ရှိပေမဲ့ တိုတို ရှင်းရှင်း နဲ့ ထင်းကနဲ မြင်သာတဲ့ စာကြောင်းလေးမို့ ကြားဖူးကတဲက စိတ်ထဲမှာ အမှတ်ထင်ထင် ရှိနေခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီစာလေး သိပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော့်မှာ ၊အဆင်မပြေမှုတွေ ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကို တွေ့ကြုံလာရရင် “ this, too, shall pass away ” အို ဘာကိစ္စပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန် တန်ရင် အားလုံး ပြီးသွားမှာပါ ဆိုတာမျိုး နှလုံးသွင်းမိတဲ့အတွက် စိတ်ဆင်းရဲတာ အကုန် ပျောက်မသွားပေမဲ့ ခံစားရတာတွေ အတိုင်းအတာ တစ်ခု ထိ လျော့သွားပြီး ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ လုပ်နိုင်လာတယ် ၊ ကြိုးစားနိုင်တာ ပိုကြိုးစားဖြစ်လာပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ အောင်မြင်မှုတွေ အဆင်ပြေ သာယာမှုတွေ အပေါ်မှာ ယစ်မူးသာယာ မိနေရင်လဲ “ this, too, shall pass away ” ဆိုတာလေး သတိရပြီး ဒါမျိုး အမြဲရနေ၊ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး အချိန်တန်ရင် အားလုံးပြီးသွားမှာပဲ လို့ သတိလေးနဲ့ ထိန်းနိုင်လာပါတယ် …
မတရားစီးပွားရှာပြီး အဆင်ပြေနေတဲ့သူ ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တလွဲ အသုံးချရင်း လမ်းမှား လျှောက်နေတဲ့ သူတွေလဲ အချိန်တန်ရင်တော့ အားလုံး ပြီးသွားမှာပါ ၊ ကောင်းသော ပြီးဆုံးခြင်းတော့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ၊ လောလောဆယ် ဖြစ်သွားတဲ့ လစ်ဗျားကိစ္စကိုပဲ ကြည့်ရင် လုပ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ကာလတုန်းက တစ်နေ့ကျရင် အသေးဆိုးနဲ့ ကြုံရမယ် ဆိုတာမျိုး ကဒါဖီ ယောင်လို့တောင် တွေးခဲ့မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ တကယ် ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ ……
နေပြည်တော်လေဆိပ်မှာ ကားကြီး စထွက်တော့ ဘယ်ကားနဲ့မှ မလိုက်ပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို ကြည့်ရင်း အဆင်ပြေနေတာတွေ ၊ ကြည်နှုး ကျေနပ်စရာ တွေကလဲ ခဏချင်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ် သတိ လက်လွတ် သာယာ ပျော်မြူး မနေပါနဲ့ ၊ ကိုယ်မျှော်လင့်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူး အခက်အခဲတွေ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ ရရင်လဲ စိတ်ညစ် စိတ်ပျက်ဖြစ်မနေပါနဲ့ ဒါကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားနိုင်တဲ့နည်း ၊ ဖြေသိမ့်နိုင်မဲ့ အချိန်ဆိုတာ တွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ် အချိန်တန်ရင် အားလုံး ပြီးသွားမှာပါ “ this, too, shall pass away ” လို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောနေ မိပါတယ် ၊ သူကတော့ ကြားနိုင်ပါ့မလား နားလည် နိုင်ပါ့မလား ….
နောက်ထပ် စကော်ပီရံ တယောက်ပါဘဲလား။
ထင်တယ် “လေ” ကိုဖမ်းမိလို့။
ကိုနိုဇိုမိရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂ရက် နေ့ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ရာချီပြီး အသက်ရှည်ပြီး၊ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၊
အလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်း၊ မိမိနဲ့ တကွ အများကိုပါမေတ္တာထား၍အကျိုးဆောင်နိုင်သောလူထူးလူမြတ်တယောက်
ဖြစ်ပါစေကြောင်း လေးလေးနက်နက် မေတ္တာပို့သခြင်းဖြင့်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
Happy Birthday ပါ ကိုနို။
စာရေးကောင်း၊ အတွေးကောင်းတဲ့ ကိုနိုစာတွေကို အားပေးနေပါတယ်။
နောင်နှစ်ပေါင်း ရာကျော် ရွာထဲမှာ ပျော်ပျော်ကြီး နေခွင့်ရပါစေ။
(ဟို လိုတာတွေလည်း ရွာတွင်းရွာပြင်မှာ အားလုံးပြည့်ပါစေ…….)၊
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် ကိုနိုဇိုမိ ခင်ဗျာ။
တလက်စထဲ ဦးကျော်သူ၊ နီကိုရဲ (အမျှဝေပါတယ်) နဲ့ နန္ဒာလှိုင်ကိုပါ ဟက်ပီးဘက်သ်ဒေး လုပ်ပါတယ်။
နန္ဒလှိုင်ကြီးကိုတော့ စိတ်နာတယ်ဗျာ၊ ကျနော်အဝေးရောက်နေတုန်း သူမို့လုပ်ရက်တယ်။ ကြုံလို့ပြောတာပါ၊ ဘာမှ မပြောခဲ့ဘူးလို့ မှတ်ပေးပါ။ ကိုယ့်ရင်ထဲက ဝေဒနာ ကိုယ်သာအသိဆုံးပါ။ အချစ်ရှုံးသမား ဒဿဂီရိလို့ ပြောရအောင် ကျနော် ရုပ်မဆိုးဘူးလေ။ တော်ပြီဗျာ ဆက်မပြောပါရစေနဲ့တော့။ အဟောင်းက အသစ်ပြန်ဖြစ်လာလို့ပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ မေ့ဖို့ကြိုးစားကြိုးစား သူ့မျက်နှာပဲ မြင်ယောင်နေတယ်။ စကားမပီကလာ ပီကလာနဲ့ ကျနော့်ကို ညောင်လို့ခေါ်ခဲ့တာ မေ့လို့ရမလား။ လွမ်းတယ်ကွာ..။ ထပ်မပြောပါရစေနဲ့တော့ဗျာ။ မိစိမ်းကားရဲ့မာယာ တောမြိုင်လယ်……။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ပီအမ်ကတဆင့် မေးနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီလောက်နဲ့ တော်ပါရစေ။ သူ့ကို မမုန်းပေမဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုတာ ရှိသေးတယ်လို့။ လူဂုဏ်ထံ မျက်နှာကြီး အသိုင်းအဝန်းမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ တဆတ်ဆတ် နာကျင်နေနဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ထပ်တူဆုတောင်းနေယုံကလွဲလို့ ဘာတတ်နိုင်တော့မှာလဲ။ ရှေ့မဆက်သင့်တော့မှန်း သိနေမှတော့ လွမ်းတာကို နာစရာနဲ့ ဖြေဖို့ကြိူးစားနေရပါပြီ။ တကယ်လို့ ရွာထဲက ပီအမ်မေးလ် မကောင်းရင် သဂျီးဆီကနေ ကျနော့် ဂျီမေးလ်းအကောင့်မေးပြီး ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သူများတွေ ဂျီတော့မှာ တချစ်ထဲချစ်နေ၊ ကြူနေချိန်မျာ ကျနော့်အဖို့ အသဲကွဲ တိုးရစ်တယောက်လို ဦးတည်ရာမဲ့ လျောက်သွားနေမိတယ်။ မုန်းဒယ်ဗျာ၊ မုန်းလိုက်ချင်တယ်။ မုန်းပါရစေ၊ မုန်းခွင့်ပြုပါ။ ဒါပဲဗျာ ခင်ဗျားမွေးနေ့မှာ ကျနော် စိတ်ညစ်စရာစကား မဆိုသင့်ဘူး။ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကိုယ်ကအသဲပေါက်အောင်ချစ်ပေမဲ့ သူမကြင်မှတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲနော်။ သူစိတ်ဆိုးရင် ပြောခဲ့တာ မှတ်မိသေးတယ်။ နင်က ပြောလိုက်ရင် မပြီးနိုင်ဘူး၊ မြင်းအီးပေါက်သလို တဘူဘူနဲ့တဲ့။ ကျနော့်ကို တိရစ္ဆှာန်နဲ့ နှိုင်းပေမဲ့ စိတ်အလျဉ်းမဆိုးခဲ့ဘူးဗျာ။ ကျနော်အဲဒီကထဲက ရိပ်စားမိသင့်ခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ အချစ်မြှားဆူးနေတဲ့သူ အဖို့ အလွယ်တကူနဲ့ မြှားကို ထုတ်ပစ်နိုင်ပါ့မလား။ အခုတော့ အဆိပ်သင့်နေခဲ့ပြီ နာနာရေ…။ ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်၊ ပြောမထွက်နိုင်တဲ့ စကားလုံး ထရီလီယံနဲ့ချီပြီး ကျန်သေးတယ်။ ရင်ထဲမှာ ကားနေတာပဲ……….
သူကြီး ဦးခိုင် ဆရာကြီးမောင်သာရ မွေးနေ့သွားတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံ တွေနဲ့
ခု ကိုကြောင်ရဲ့ ကိုနိုဇိုမိအတွက် ဟက်ပီးဘတ်ဒေး လုပ်ပုံ တပုံစံထဲပါဘဲလား.?
တောက်ခေါက်သံဟု တစ်ချို့ ထင်ကြသည်။
မိုးပေါက်ကျသံဟု တစ်ချို့  ထင်ကြသည်။
တံခါးခေါက်သံလား… No… No… No..
ကိုကြောင်ကြီး ရင်ကွဲ လွမ်းချင်းကိုဖတ်ပြီး ကျတဲ့ မျက်ရည်…
သံဝေဂ ပို့ စ်ပဲ ဦးနိုရေ
သိပ်မှန်တဲ့..This, too, shall pass away.ပါပဲ..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အိုကေနေတယ်ဆိုပြီး ဖီးလ် တက်နေလို့ မရဘူး.လေယာဉ်ပေါ်က အဘွားကြီးလိုဖြစ်မယ်
ကျနော်လဲ အမြဲ မွဲမနေဘူး..This, too, shall pass away.သွားလိမ့်မယ်
ဦးနို နဲ့ အတူ ဦးကျော်သူကြီးလဲ…
မနက်ဖြန်မှာ ပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေခင်ဗျား..
“ံHAPPY BIRTHDAY” for the day after tomorrow
နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည်
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီး
ကို နိုဇိုမီ ရေ။
ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီ VIP = Very Important Person ဆိုတာကြီးကို
ခေတ်နဲ့လျော်ညီ အောင် ဒီလို ပြောင်းလိုက်ချင်တယ်။
VIP = Valid In Prison ဆိုရင် ဘယ်လို သဘောရလဲ။
“Happy Birthday” ပါ ကို “nozomi” နောင်လဲ ဒီလို. ပိုစ်ကောင်းကောင်းလေးတွေ အမြဲ
ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာနဲ.ေ၇းပေးနိုင်ပါစေဗျာ။
ယခု ကျရောက်မည့် မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ချမ်းသာစွာဖြင့်
ဂေဇက်မှာ ဒီထက်တိုး ရေးသားနိုင်ပါစေ ဗျာ
ပျော်ရွင်စရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး မိသားစုနဲ့ အတူ ရှေ့ဆက် အနာဂါတ် နေ့ရက်တွေမှာ ပျော်ရွင်သော အေးချမ်းသော စိတ်သောကကင်းသော နေရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ ကောင်းမွန်သော လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့ သာ ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေ။
ဦးလေးနဲ့ ဆူး နဲ့ မွေးလ တူတယ်။
ဦးဝှိုက်ကနေ နံမည်ပြောင်းထားတဲ့ ဦးနိုဇိုမိရေ …
မွေးနေ့မှာ အသက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ မပြောထားလို့ အသက်ကြီးတယ်လို့ပဲ မှတ်လိုက်တော့မယ် …
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ….
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်တန်ရင် အားလုံးပြီးသွားမှာပါ ….
ကို “nozomi” ရေ
“Happy Birthday” ပါဗျာ ။
ကောင်းကျိုး လိုရာ ဆန္ဒများ ပြည့်ဝပါစေလို့
ကိုကျော်သူ့ဆီ ပို့ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ ။
ကျွန်တော် ” မလှမ၀..ဒုက္ခဘ၀များ ” ဆိုတဲ့ Post မှာ
မန့်ထားတဲ့ Comment လေးပဲ တလုံးမကျန်
အောင်မာ အောင်မာ အိုက်လိုကြီး မလုပ်နဲ့ လေ။
ကျုပ် နာမည် နိဂိမိ ကျတော့ မသိဘူးပေါ့လေ။
သိချင်ရင် ကိုပေ ကို မေးကြည့် …ဟီးးးး :p
happy birthday ပါကိုနိုဇိုမီရေ
ထူးခြားစွာ စွမ်းဆောင်နှိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
Happy Birthday !!!!ပါဗျိုး konozomi
ဟင့် ကျွန်တော်တွေးမဲ့ရေးမဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်လွှာတွေက အားလုံးနဲ့ ထပ်တူကြနေပါလား။
!! !! !!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !! !!
!! !! !! !! !! ! !! ! !! !!
!!!!!!!!!! !!!***!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !! !!
!! !! !!! !!! !! !! !!
!! !! !!! !!! !! !! !! Birthday။
မွေးနေ့မှာ ကိုယ်ချစ်သောသူနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က ! လေးနဲ့ happy လို့ပုံဖော်ပြီးရေးထားတာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး။ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်ဖွား
မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင်
(၁၀၀လောက်ပဲကောင်းတယ်ဗျ၊ ကျော်သွားရင် တုန်ချိတုန်ချိ ဖြစ်နေမယ်)
ဂျေလို လို ဘော်ဒီ
မာသာထရီဇာ လို စိတ်ဓါတ်
အဲဒါမျိုးတွေ အားလုံးပိုင်သော မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့
Happy Birthday ပါနော် …
စိတ်ဧ။် ချမ်းသာခြင်း ၊ ကိုယ်ဧ။်ကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံပြီး …. အောင်မြင်တဲ့ မိသားစုဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် … ဒါနဲ့ …
ကို နိုဇိုမိ တယောက်
နွေမှာဆို ….. နေရောင်ခြည်နဲ့ အတူ…….
မိုးကျရင် ……..မိုးနဲ့ အတူ….
ဆောင်းရောက်ရင် ….. နှင်းမှုံလေးတွေနဲ့ အတူ ကျရောက်ပြီး …….
ချမ်းမြေ့ကြည်သာတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို ……
VIP ကိစ္စတော့ နောက်မှ အကုသိုလ်များပါတော့မယ်။
ကျုပ်ဒီရွာစရောက်ကတည်းက စာရော စေတနာရော သတိထားမိခဲ့တဲ့
ကို နိုဇိုမီ တယောက်
ဒီမွေးနေ့မှစလို့ တသက်တာထာဝရ ချမ်းမြေ့ပါစေ…….လို့ ……..
သေမည့်နေ့ပို နီးလာပြီနော်။
ခင်ဗျား အသက် ၆၀ ထိ ရှည်မယ် ဆိုရင် ကျုပ်တို့ဒီမှာ စာများများ ဖတ်ရတာပေါ့ဗျာ။
လာပြီးသားပါ။ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲ ချမ်းသာချမ်းသာ ဒီဖင် ဒီပေါင်နဲ့ ဒီပစ္စည်းပါဘဲ။
ဆင်းရဲဆင်းရဲ ချမ်းသာချမ်းသာလူတိုင်းလူတိုင်းတစ်နေ့ကို ၂၄နာရီထက်အပြင်ပိုမရပါဘူး။
မွေးနေ့မှာ စိတ်ပျော် စော်ကြည် အလုပ်မလုပ်ဘဲချမ်းသာပါစေဗျာ……..ဟိဟိ …:P
စိတ်ရှုပ်စရာတွေ့တဲ့ အချိန်ဖတ်မိလို့ထင်တယ်.ကိုယ်နဲ့ယှဉ်တွေးမိတော့ သင်ခန်းစာရပါတယ်..မှန်ပါတယ်
(နာမည်တပ်ပြီးမန့်မိတာ က ရွာသားတွေရဲ့ခင်မင်မှု ကိုဖော်ပြတဲ့.ပုံထင်လို့ အတုခိုးထားတာပါ)..:-)
Happy Birthday ပါကို နိုဇိုမိရေ
စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး
ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့သော မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နီုင်ပါစေ ………….
ဦးအဖြူရောင် (ခ) နိုဇိုမီ …. မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ဖြစ်ချင်သော ဆန္ဒများကို လုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် …………. မွေးနေ့ကိတ်လေး ချားချင်တာ …….
ကိုကြောင်ကြီး ရင်ကွဲ လွမ်းချင်းကိုဖတ်ပြီး
နောက်ပီး…မိဘတွေကအတင်းအကြပ် စီမံကြလို့ ယူလိုက်ရတာပါ
ဒီနေ့ပါတီ လုပ်နေလို့ ရွာထဲ မ၀င်အားဘူး ထင်တယ်။
ဟင့် တူညားတို့ကိုကျတော့ ဆုတောင်းခိုင်းတယ် ဘာမှလည်း မကျွှေးဘူး။
၀ လုံးဝ မိကျေနပ်ဘူး ဒါဗြဲ.. ဟွန့်… :angry:
ကွန်ပျူတာရှေ့ရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန် ၊ကိုယ် ချစ်ခင် ရတဲ့ ရွာသားတွေ ဆီက ချစ်ခင်မှုတွေ ပြန်ရတော့ ရလိုက်တဲ့ ၀မ်းသာမှုက ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ
ခါတိုင်းကတော့ မိသားစုရယ်၊သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ နဲနဲ ရယ် နဲ့ပဲ ဖြတ်ကျော်ဖြစ်နေတာ ၊ အခုကတော့ ရွာထဲက မိတ်ဆွေ အများကြီးနဲ့ ပျော်စရာကြီးပဲ ၊ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊
သူကြီး၊ ရွာသားအားလုံးနဲ့ အတူ ဒီရွာကြီးရဲ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း တွေကို အတူတကွ နှစ်တွေ ကြာကြာ လုပ်ချင်ပါသေးတယ်
ရွာက မိတ်ဆွေ တွေကို မွေးနေ့အမှတ်တရ တကယ်ကျွေးချင်ပါတယ်
၁၀ ယောက်နဲ့ အထက် လာမယ်ဆို တကယ်ကျွေးပါမယ်
HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY